njani ukuba loluphi uguqulelo FSX ifakiwe computer yam? FSX-SP1, SP2 okanye lonikezelo?
Ukwazi ukuba loluphi uguqulelo lwe FSX ifakiwe computer yakho, kulula: Qala FSX, aze aqalise uhambo naphi na ofuna, nayiphi na moya ofuna. Ngoku, ngaphezulu ikhusi lakho, vula bar menu (ukuba awusele kuvulwa) kwaye nqakraza «Uncedo» ekunene. Apha, nqakraza «Malunga». Iwindow ilandelayo kwavakala umboniso wakho FSX: